Ngoku unokukhuphela i-GTA 5 simahla | Iindaba zeGajethi
Ngoku unokukhuphela i-GTA 5 simahla
Ubusela obukhulu beV V, yenye yezona zinto zibalaseleyo kwimbali yeMidlalo yeRockstar kwaye isaphila njengomhla wokukhutshwa kwayo, ikhululeke ngokupheleleyo kangangexesha elithile. Ewe uya kuba nakho ukufikelela kukhuphelo lwe-GTA V simahla nangonaphakade ngamanyathelo ambalwa alula enkosi kwakhona kwimidlalo ye-Epic. Sichaza ukuba ungayikhuphela njani i-GTA V simahla kwiVenkile yeMidlalo ye-Epic kwaye uyigcine kwiPC yakho ngonaphakade.
Siqinisekile ngokupheleleyo ukuba uluntu lwase GTA V izakufumana ukomelezwa okomeleleyo ngeli xesha enkosi kunikezelo.
Into ebalulekileyo ekufuneka uyikhumbule yimihla emisiweyo, unokukhuphela i-GTA V ngokupheleleyo yasimahla kwiVenkile yeMidlalo ye-Epic okoko kwapapashwa esi sifundo kude kube ngoMeyi 21, 2020 ngo-17: 00 emva kwemini.
I-GTA V ngowona mdlalo uthengisa kakhulu kwimbali ukusukela oko yasungulwa ngo-2013 kuwo onke amaqonga, ngaphezulu kwe-120 yezigidi zeekopi. Ngokukwanjalo, imo yayo ekwi-Intanethi ibizwa ngokuba GTA Online Le yenye yezona ndawo zidumileyo kwi-intanethi. ,
1 Uyikhuphela njani i-GTA 5 yasimahla
2 I-GTA V Izinto eziNcinci ezifunekayo-iPC
Uyikhuphela njani i-GTA 5 yasimahla
Kulungile into yokuqala esiza kuyenza yile fikelela kwiwebhusayithi yeMidlalo ye-Epic Gcina kwaye wenze iakhawunti. Kungenzeka ukuba sineakhawunti ye-Fortnite ukuba oku akuyomfuneko kuba sele siza kubhaliswa neziqinisekiso ezifanayo: UKUFUMANEKA LINK
Nje ukuba ungene ngaphakathi, kweli candelo lemidlalo yasimahla (LINK) uza kubona Uhlobo lweVoft Auto V phakathi kwezo zikhoyo. Yicofe kwaye uyikhuphele umbulelo kumqalisi ovela kwiVenkile yeMidlalo ye-Epic.
I-GTA V Izinto eziNcinci ezifunekayo-iPC
SW: IWindows 7 64-bit
I-2 GHz Intel Core 6600 Quad CPU Q2,4 (ii-4 ze-CPU)
I-AMD Phenom 9850 Quad-Core (4 CPUs) 2,5 GHz
I-RAM: 4 GB
Ikhadi lemifanekiso: I-NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB
I-DirectX 10 ifakiwe
Umsebenzi wediski enzima: I-72 GB yendawo ekhoyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Ngoku unokukhuphela i-GTA 5 simahla
I-SPC Jasper, ifowuni yabantu abadala ene-WhatsApp [UHLAHLELO]
Uyirekhoda njani iqela lakho levidiyo